Unxuse ubumbano uRamaphosa ethula iThuma Mina | News24
Unxuse ubumbano uRamaphosa ethula iThuma Mina
PHOTOs: supplieduMongameli Cyril Ramaphosa enikezela ngamatayitela ezindlu KwaDukuza.
INHLANGANO i African National Congress esifundeni iGeneral Gizenga Mpanza sijoyine umomgameli Cyril Ramaphosa ekwethuleni umkhankaso wenhlangano ebusayo iThima Mina esifundazweni iKwaZulu Natali nobubanjelwe ezinkundleni zemidlalo eGroutville ngomqibelo mhla zi-7 kuNtulikazi.
Umongameli Ramaphosa uqale usuku ngohambo lwamakhilomitha amahlanu lusuka eSadtu Park KwaDukuza luya eMdonivile kuWard 16 ukuyonikezela ngamatayitela ezindlu. Izinkubi zamavolontiya kaANC kanye namalungu omphakathi abambe iqhaza kuloluhambo nobeluhlanganisa umkhankaso wokuklina enkabeni yedolobha.
Ethula inkulumo yakhe ngenkathi sekwethulwa lomkhakankaso enkundleni yaseGroutvile uRamaphosa uthe ubumbano lubalulekile phakathi kwamalunga futhi kuzomele iphele lento yokuthi kunabaholi abangamukelekile esifundzweni i KZN.
“Namuhla maqabane ningimangazile njengoba Sisonke nje la futhi sibaningi siyimbumba, sijabhise nezitha. I Thuma Mina isiphenduke umkhankaso omkhulukazi kulolonke leli njengoba namhlanje ngingasho ngokuziqhenya ukuthi ngithi singamavoluntiya kaKhongolose sibumbene,” kubeka uRamaphosa.
Uhambo ukamomgameli lolandelwa udaba ade lusematheni lokubizwa kweMbizo kaZulu yiSilo Samabandla uGoodwill Zwelithini ngelelule okuzokhuluma ngeNgonyama Trust enganyelwe uye. Kuke kwaba nokushintshana kwamazwi phakathi kwabasebukhosini bakwaZulu kanye nabaholi beANC nokwenze umongameli ahlangane neNkosi nalapho ayiqinisekisile ukuba uhulumeni wakhe angeke uyihlakaze iNgonyama Trust.
“ Uma sifuna ukuvuselela amagatsha lena yiwona mkhankaso ozosiza yingakho ngifisa ukubonga i KZN ngokuhamba phambili ngamalungiselelo ukukhankasela ukhetho lango2019.
“Ngiswele namazwi okubonga ubuholi besifundazwe besikhashana (PTT) ngomsebenzi wabo. –Ukulwa kwangaphakathi, uqhekeko kuKhongolose kuzomele luphele,” kuqhuba uRamaphosa.
Lomkhankaso ubuhanjelwe ubuholi besifunda (REC), obesifundazwe (PEC/PTT), amalungu esigungu esiphezulu sikazwelomke (NEC) kanye namavolontiya alinganiselwa ku-5000.